Bahrain: Famoretana Tanaty Rà Mandriaka Hatrany an-Tanàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Marsa 2011 12:07 GMT
Ity lahatsoratra ity dia isan'ireo tatitra manokana ataonay momba ny Hetsi-panoerana Bahrain 2011.
Tamin'ny Talata, talohan'ny nanambaràn'ny Mpanjaka Hamad bin Isa Al-Khalifa ny Lalàna momba ny Filaminam-pirenena manome fahefana ny tafika sy ny hery hafa hiantoka ny filaminan'ny firenena, dia nanao herisetra sy faneriterena eran'ny tanàna maro ao amin'ny faritra afovoan'i Bahrain ny polisy.
Niditra tany anaty tanàna tany ireo polisy nanao akanjo toy ny olon-tsotra ary akanjo aro bala, mitifitra tsy amin'antony an'ireo vahoaka amin'izao fotoana izao. Ity video manaraka ity dia avy any an-tanànan'i Sitra misy ireo polisy mitifitra ny mponina.
Nampakarin'i Saloooh97, mpampiasa YouTube
Tena sary mivandravandra misy lehilahy tanora iray avy ao an-tanànan'i Sitra voatifitra avy any an-katony no niseho masoandro.
@FawazSaad يا حكومات الخليج وياعقلاء الشيعة نتوسل إليكم فالدماء لن تجلب الحلول http://twitpic.com/49rfmu #Bahrain (Sary mivandravandra)
O ry GCC (Gulf Cooperation Council) governemanta, O ry Shiita manam-pahalalàna, mangataka anareo izahay mba hitsahatra fa tsy mitondra aminà vahaolana ny fandatsahan-drà.
Noho ireo tranganà fandatsahan-drà, maro ireo tatitra no niseho masoandro tao amin'ny Twitter fa hoe betsaka tamin'ireo mpikambana ao amin'ny Filankevitra Shura no nametra-pialàna. Mbola mila hamarinina amin'ny fomba ofisialy ireo.
@abdulemam Nanamafy fa efa vaovao azo antoka ny fametraham-pialàn'ireo mpikambana tao amin'ny Filankevitra Shura:mohammed radhi,mohammed alhalwachi,nasir almubarak,nada hafad,abdulhussain a.ghaffar #bahrain #lulu
@nice_n_blue @abdulemam Araka ny loharanom-baovao ofisialy sy ny mpitondra tenin'ny Filankevitra Shura, tsy mbola nisy olona nametraka fialàna izany.